I-china nylon ibhanti pulley eyenziwe china mveliso kunye nabathengisi IH & F. nylon
wenayiloni Belt Pulley
Ikheshi yenylon pulley
intambo yesikhokelo sentambo
iinxalenye zeyiloni ezizodwa
Nylon ibhanti Pulley
Ikheshi inayiloni Pulley
Iindawo ezikhethekileyo ze-nylon
ubungakanani obahlukeneyo beyayila ye washer
Isikhokelo sentambo yenayiloni eyilelwe iitoni ezili-10 zekrane
Umgangatho ophezulu wenayiloni pulley yecrane
Nylon ibhanti pulley eyenziwe e-china
Izixhobo zenayiloni zoomatshini
Nylon pulley eyenzelwe ikheshi
I-mic nylon ibhanti le-pulley lisetyenzisiwe kushishino loomatshini amashumi eminyaka ngeenzuzo ezingenakuthelekiswa nanto zengxolo ephantsi, ukwandisa ubomi benkonzo ngentambo yocingo, ukuzithambisa ngokwakho njalo njalo.
ubukhulu: Ngokweemfuno zomsebenzisi
izinto: mc nylon / nylon
umbala: Ngokweemfuno zomsebenzisi
Izinto eziluncedo zesicelo seyiloni ibhanti pulley
(1) Ukwandisa ubomi benkonzo ngentambo yocingo, i-coefficient encinci ye-friction,. Ngaphandle kokusebenzisa iiplastikhi zebhanti yenylon ngaphambi kokuba ubomi benkonzo yentambo yocingo iinyanga ezi-1.2 kuphela, ngoku inokusetyenziselwa iinyanga ezi-4.
(2) ukuthambisa ajikeleze Good, ukumelana lingonakali,. Ukuhlolwa kwenayiloni pulley groove egudileyo, akukho zibambiso kunye neempawu zokunxiba.
(3) ubulukhuni elungileyo. Impembelelo enganyangekiyo kuneepleys zentsimbi.
(4) ubunzima okukhanyayo, akukho umhlwa. Ubunzima bulingana ne-1/8 yee-pulleys zentsimbi, ekulula ukuyitshintsha kwaye kunciphise amandla abasebenzi.
(5) Ukuqhuba kakubi kombane. Beka isiphelo kwinto yoqobo kwi-hook xa udibanisa usebenzisa intambo yentsimbi njengomhlaba, ukhuseleko oluhle kakhulu lwentambo yentsimbi kumonakalo we-arc.
Umba: Inayiloni ibhanti pulley
Udidi: Izixhobo zoomatshini / izixhobo ezincedisayo
Igama lebrand: huafu
Indawo yokuQala: huai'an China
izinto: i-95% yenayiloni kunye nezinye izithako.
Isiqinisekiso: Ukufaneleka kumgangatho wasekhaya
1. Uqinisekiso lwethu lomgangatho
Ngaphambi kokupakisha, kufuneka silawule umgangatho wenkqubo nganye ukunqanda iziphene kwinkqubo yokuvelisa.
2. Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza
Kukho isitokhwe esaneleyo kunye nezixhobo eziphambili kunye noomatshini abasetyenziselwa imveliso ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwisithuba seentsuku ezili-15 ukuya kwezi-30.
Umsebenzi we-R & D wabasebenzi emva kokuthengisa, nceda unxibelelane nathi, siya kuphendula zingaphelanga iiyure ezingama-24
4. Faka isicelo
Isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lweentambo zombane eziphezulu.
1: ipakethe ye-PP enegunya lokulayisha ngaphezulu.
2: iphakheji yebhokisi eneblue esongelwe ngaphakathi.
I-3: iphakheji ye-pallet ukuze ikhuseleke ngakumbi kwaye ikhuseleke.
4: enye iphakheji eyenziwe.
Egqithileyo Izixhobo zenayiloni zoomatshini
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu wenayiloni pulley yecrane
I-nylon roller kwisitokhwe
ubukhulu ekhethekileyo wenayiloni Coupling
Isilayidi senayiloni esenziwe ngeCusomerized